अघिल्लो शुक्रबार साइवरावादको पुलिस जनअसन्तुष्टिको केन्द्रमा थियो । एक पशुचिकित्सक महिलाको सामुहिक बलात्कार र हत्याको घटनालाई ठीक ढंगले छानविन र न्यायनिरुपण नगरेको गुनासो सर्वत्र सुन्न पाइन्थ्यो । तर, पछिल्लो शुक्रबार स्थिति ठीक उल्टो भयो । पुलिसप्रति जनसाधारणले प्रशंसाको फूल बर्षा गरे ।
एक हप्ताभित्रै ३ प्रहरी निलम्बित र ४ आरोपी गिरफ्तार भए । अन्ततः ४ आरोपीलाई भाग्न खोजेको आरोपमा कथित मुठभेठमा गोली हानी उडाइयो । एक हप्ताभित्रका यी घटनाले साइवरावाद पुलिसको छवीमा नयाँ मोड आयो । सर्वसाधारणले पुलिसलाई प्रेम, पत्यार र कृतज्ञताको नजरले हेरे । कथित मुठभेठ जनताको नजरमा प्रहरीको अत्यन्त उदाहरणीय काम बन्यो । हैदरावाद इन्काउन्टर यो हप्ता भारतीय प्रेसको सबैभन्दा ठूलो न्यूजमेकर बन्न पुग्यो ।
साइवरावादले हैदरावाद शहरको दक्षिण–पश्चिम क्षेत्रलाई बुझाउँछ जहाँ सूचनाप्रविधि हब र वित्तीय कारोवार गर्ने संस्थाहरु केन्द्रीकृत छन । सन् २००३ पछि यो क्षेत्रमा तीव्र शहरी विकास र सघन बसोबास हुन थालेको हो । त्यसपछि मुख्यमन्त्री चन्द्रबाबु नाइडुले यो क्षेत्रलाई विशेष महत्व दिए । भिन्नै सुरक्षा रणनीतिको आवश्यकता बोध गरी भिन्नै प्रहरी कमिसारको व्यवस्था गरे । साइवरावाद पुलिसले ३६ पुलिस स्टेशनमार्फत् करिब ३६०० वर्गमिलोमिटर क्षेत्रको देखभाल गर्दछ । यो क्षेत्रमा राजिव गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएको शमसदावाद पनि छ, जहाँ नोभेम्बर २ मा त्यो विभत्स घटना भएको थियो ।
जुन रात ती पशुचिकित्सक हराएकी थिइन्, विभत्स घटनाका विवरणहरु टिभीको पर्दामा देशभरि सल्वलाएका थिए तर राजिव गान्धी विमानस्थल पुलिस स्टेशनले यो घटनालाई खासै महत्वका साथ लिएको थिएन । यहाँसम्म कि उनका आफन्तहरुको गुनासो समेत पुलिसले राम्ररी ध्यान दिएर नसुनेको समाचार बाहिरिएको थियो ।
त्यो बिहान ९.२२ बजे उनले आफ्नी बहिनीलाई फोन गरेर आफ्नो सुरक्षा भयबारे सूचना दिएकी थिइन । शमसदावाद पुलिस स्टेशनले त्यसको भोलिपल्ट मात्र पीडित परिवारको गुनासो सुन्न स्वीकार गर्‍यो । जनआक्रोशको तारो तेलंगाना राज्यका गृहमन्त्री मो महमुद अली समेत थिए जसले ‘पशुचिकित्सक महिलाले बहिनीको साटो फोन नं. १०० मा सिधै पुलिसलाई डायल गर्नु पर्थ्यो’ भन्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
शुक्रबारको इन्काउन्टरपछि साइवरावाद पुलिस कमिस्नर भिसी सञ्जानरको जयजयकार ‘सिंघम’ र ‘साहो’ को झैं भइरहेको छ । सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताहरुले सञ्जानरलाई ती सिनेमाका नायकसंग समानान्तर हुने गरी चित्रण र प्रसंशा गरिरहेका छन् । सञ्जानरको बारेमा यो पनि सुन्न पाइएको छ कि सन् २००८ को एक एसिड आक्रमणको घटनामा उनले ३ आरोपीलाई शुक्रबारजस्तै ठाउँको ठाउँ लगेर मारेका थिए । सञ्जानर सन् १९९६ का ब्याजका कर्नाटका आइपिएस अफिसर हुन् जो माओवादी विरोधी अप्रेसनका ज्ञाता समेत मानिन्छन् । साइवरावाद पुलिस कमिसरको नातामा नोभम्बर २ को घटनामा सञ्जानरले जनआक्रोश र आत्मग्लानिको सामना गर्नुपरेको थियो ।
सञ्जानारले तुरुन्तै १० वटा प्रहरी टिम यो अपराधको अनुसन्धानका लागि खिचे ।
प्रत्यक्षदर्शीहरुको बयान, सिसिटिभी फुटेज र अन्य प्रमाणहरुको आधारमा प्रहरीले नोभेम्बर २९ मा मोहम्मद आरिफ, जोल्लु शिब, जोल्लु नविन र सी चेन्नेकेसुल गरी ४ जनालाई पक्राउ गर्‍यो । यी सबै दक्षिणी तेलंगानाको मतकलाका थिए । ४ जना नै भर्खरै २० बर्ष उमेर कटेका थिए । नोभेम्बर ३० तारिखमा प्रहरीले ४ जनाकै लागि १० दिनको न्यायिक हिरासत आदेश माग गरेको थियो ।
तर जनआक्रोश झनझन बढी रहेको थियो । पुलिस स्टेशन अगाडि जनप्रदर्शन हुन थाले । श्रद्धानगर पुलिस स्टेशन अगाडि ठूल्ठूलो प्रदर्शन हुन थालेपछि पुलिसले उनीहरुलाई मुश्किलले चेल्लापर्ली जेल सारेको थियो । डिसेम्बर ३ देखि उनीहरु सोधपुछका लागि प्रहरी हिरासतमा थिए ।
राजिव गान्धी विमानस्थल पुलिस स्टेशनका तीन प्रहरी कर्मचारी– सवइन्स्पेक्टर रवी कुमार, २ हेड कन्स्टेवल वेनु गोपाल रेड्डी र सत्य नारायणलाई अपराध भएको रात आफ्नो कर्तव्य ठीक ढंगले निर्वाह नगरेको कारण निलम्बित गरिएको थियो । शुक्रबारको इन्काउटरपछि पुलिस कमिस्नर सञ्जानरले पत्रकार सम्मेलनमा दिएको बयान अनुसार– ‘ती आरोपीहरुलाई अपराध स्थलमा प्रमाणको संकलन, उनीहरुका छुटेका मोबाइलको खोजीका लागि गरिएको हो ।’
सञ्जानरले अगाडि भनेका छन्, ‘जब हामीले उनीहरुलाई त्यहाँ पुर्‍यायौं, उनीहरु अचानक प्रहरीमाथि जाइलागे । उनीहरुले भुईंमा भएका ढुंगा र लठ्ठीले प्रहरीलाई हिर्काउन थाले । २ जना अरिफ र चन्नाकेसभुले प्रहरीकै हतियार खोसेर फाइरिङ गर्न खोजे । उनीहरुलाई बारम्बार त्यसो नगर्न भनियो । तर मानेनन् । प्रहरी फन्दाबाट भाग्ने इच्छाले उनीहरु पागलजस्तै भएका थिए तर जे पनि गर्न थालेका थिए । प्रहरी गोली चलाउन बाध्य भयो । अस्पताल पुर्‍याउँदा उनीहरु मरेको पाइयो । प्रहरीतर्फ दुईजना घाइते भएका छन् ।’
प्रहरीको यो बयानलाई कसरी लिने ? कति विश्वास गर्ने वा नगर्ने ? चर्को जनदबाब नभएको भए न्यायिक प्रक्रियामा आइसकेका व्यक्तिहरुलाई प्रहरीले इन्काउन्टर गर्नु पर्थ्यो वा पर्दैनथ्यो स्वभाविकरुपमा अनेक प्रश्न उब्जिएका छन् । संक्षिप्तमा यति भन्न सकिएला घटनाको प्रारम्भदेखि नै प्रहरीले आफ्नो दायित्व ठीक ढंगले निभाउन सकेको भए सायद जनता त्यो स्तरमा उत्तेजित हुने थिएनन् र कथित भुठभेदको परिस्थिति बन्ने थिएन होला ।
-द प्रिन्टबाट भावानुवाद गरिएको